Dagaalkii xaq u dirirka iyo maryacalasta SNM oo sii fidaya,iyo khasaaraha oo isa soo taraya. | Sarmaanyo.com
Dagaalkii xaq u dirirka iyo maryacalasta SNM oo sii fidaya,iyo khasaaraha oo isa soo taraya.
Posted on November 29, 2012 by darwiish	Sarmaanyo.com:-Waxaa maalintii labaad qarxay dagaalkii xudun,Waxuuna Dagaalkan oo Sii qadhaadhaaday Hada kusii durkayaa Goobo hor leh oo Lasheegay Inay Fadhiisino u ahaayeen Ciidamada Maamulka Siilaanyo.
Wararkii u dambeeyey waxay sheegayaan in , Jabhada SNM Laga Kiciyey Sadex Goobood, Qasaaraha Dagaalkuna waa mid marba marka ka dambaysa sii kordhaya,, Jab Xoogan ayaa Gaadhay jabhadda soomaali diidka ah ee Siilaanyo hogaamiyo, Waxaana la arkayaa firxadka Maleeshiyaadka Siilaanyo”.
Dagaalka Ayaa hadba marka ka danbaysa sii xoogaysanaya Waxaana wali la hayn qasaaraha dhabta ah ee Labada dhinacba wixii kusoo kordha Dib kala Soco wixii soo kordha.